जनै पूर्णिमा-रक्षाबन्धन : थाहा छ ? डोरो बाँध्दा पढिने मन्त्र 'येन बद्धो……' को अर्थ – Nepal Japan
जनै पूर्णिमा-रक्षाबन्धन : थाहा छ ? डोरो बाँध्दा पढिने मन्त्र 'येन बद्धो……' को अर्थ
नेपाल जापान १९ श्रावण ११:४६
प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा (ऋषि तर्पणी) पर्व आज (साउन १९ गते सोमबार) देशभर नव यज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदै छ । पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षासूत्र बाँध्छन् । गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको यज्ञोपवीत एवं डोरो (रक्षासूत्र) धारण गरेमा नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ ।
यसैकारण गुरु पुरोहितहरूले ‘येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमा चलमाचल’ भनी रक्षासूत्र, रक्षाबन्धन अथवा डोरो बाँध्ने वैदिक परम्परा रहेको छ । डोरो बाँध्दा पढिने मन्त्रको भावार्थ यस्तो छ- “जून रक्षासूत्रबाट महान शक्तिशाली दानव राजा बलिलाइ बाँधिएको थियो, उही रक्षासूत्रबाट म तिमीलाई बाध्दैछु । हे रक्षे तिमी आफ्नो संकल्पमा तिमी वलि राजा जस्तै अडिग रहनु !”
स्नानपछि जौ, तिल र कुशद्वारा ऋषिहरूलाई तर्पण गरी वैदिक रुद्राभिषेक पद्धतिबाट मन्त्रिएको नयाँ जनै (यज्ञोपवीत) फेरिन्छ । अरुन्धतीसहित कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र अगस्त्य गरी आठ ऋषिलाई पूजा एवं तर्पण गर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऋषितर्पणी पनि भन्ने गरिएको हो ।